Bit By Bit - Ethics - 6.7.3 Cabanga kwesimilo nokucwaninga ngendlela eqhubekayo, hhayi leyehlukene
Mela mayelana izimiso ucwaningo yezenhlalakahle age digital njalo okwenzekayo ngokwemibandela kanambambili; Ngokwesibonelo, Contagion Emotional kungaba isikhalo sokuziphatha noma kwakungeyona zokuziphatha. Le ndlela yokucabanga kanambambili polarizes ingxoxo, ekhubaza imizamo ukuthuthukisa izinkambiso okwabelwana, ikhuthaza ubuvila nabanengqondo, futhi absolves abacwaningi ogama ucwaningo libhaliwe "zesimilo" kusukela umthwalo wabo wemfanelo ukuba benze okwengeziwe ngobulungiswa. I izingxoxo ezikhiqiza kakhulu ukuthi ngiye ngabona abantu abangafuni ezihilela izimiso zokuhle ucwaningo ukudlulela ngale ndlela yokucabanga kanambambili umbono okuqhubekayo mayelana nendlela yokuziphatha yocwaningo.
Inkinga enkulu ewusizo ngekhono lokubambisana lendlela yokucwaninga yukuthi i-polarizes ingxoxo. Ukubiza ukungenelela ngokomzwelo "okungahambisani nokuziphatha" kuwukhuphula kanye nezinyathelo zangempela ngendlela engasizi. Kunalokho, kuyasiza kakhulu futhi kufanelekile ukukhuluma ngokuqondile mayelana nezici zocwaningo oluthola kunenkinga. Ukusuka ekucabangeni okubambile nokukhuluma ulimi akusikho ucingo ukuthi sisebenzise ulimi oludakiwe ukuze sifihle ukuziphatha okungahambi kahle. Esikhundleni salokho, umbono oqhubekayo wokuziphatha uzocabanga ukuthi uholela olimini oluthe xaxa futhi olunembile. Ngaphezu kwalokho, umbono oqhubekayo wokuziphatha kocwaningo ucacisa ukuthi wonke umuntu-ngisho nabacwaningi abenza umsebenzi osekucatshangwa ukuthi "ukuziphatha" -kufanele bazame ukudala ibhalansi elungile nakakhulu emisebenzini yabo.
Inzuzo yokugcina yokuthutha ekucabangeni okuqhubekayo yukuthi ikhuthaza ukuthobeka kwengqondo, okufanelekile lapho ubhekene nezinselelo ezinzima zokuziphatha. Imibuzo yokuziphatha kocwaningo eminyakeni yobudala yinkimbinkimbi inzima, futhi akukho muntu oyedwa okufanele aqiniseke ngokweqile amandla akhe okuthola isenzo esifanele.